Fampidirana ny Suko Ptfe （Uhmwpe） Ram Rod Extruder - SuKo Polymer Machine Tech Co., Ltd.
PTFE (polytetrafluoroethy) dia fantatra amin'ny anarana hoe PTFE, Teflon ary Plastic King. Ny extruder Teflon dia milina iray manampahaizana manokana amin'ny famoahana ireo vokatra PTFE (UHMWPE). Amin'ny alàlan'ny andiana dingana toa ny fitrandrahana, ny fanafanana ary ny fampangatsiahana, ny akora vita amin'ny vovoka PTFE efa niova dia novolavolain'ny extruder ram rod mba hamokatra Tsorakazo PTFE vokatra mifanaraka amin'ny famaritana isan-karazany. Voakasiky ny anton-javatra mifandraika toy ny fampiasana, ny tsipiriany, ny akora, ny zavatra takian'ny mpampiasa sns., Suko dia afaka mamolavola sy mamokatra milina tehina PTFE amin'ny famaritana samihafa. Ny vokatra polytetrafluoroethylene (polyethylene mavesatra molekiola avo indrindra) vokarin'ny ram rod extruder dia be mpampiasa amin'ny simika, fitsaboana, aerospace, fanodinana mekanika, fifanakalozana hafanana ary sehatra hafa.
Suko miaraka amin'ny traikefa fikarohana sy fampandrosoana efa an-taonany maro amin'ny sehatry ny fitaovan'ny PTFE, manokana amin'ny fikarohana, fampandrosoana, famokarana ary fivarotana fitaovan'ny PTFE. Ny fitaovantsika dia nanompo firenena sy faritra efa-polo teo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny mpanjifanay dia avy amin'ny indostrian'ny fitsaboana, indostrian'ny aerospace, indostrian'ny tafika, indostrian'ny simika, indostrian'ny fiara sy indostrialy fittings fantsom-pitaovana isan-karazany, ary Suko dia eken'ny indostrian'ny fluoroplastic iraisam-pirenena.
Asa fitoriana an'ny orinasa: Mamorona ny marika PTFE marika voalohany manerantany. Mendrika hatokisana anao i Suko.
1. TOETRA an'ny PTFE （UHMWPE） RAM ROD EXTRUDER
PTFE tehina extruder afaka manery tsorakazo hatrany ary ny tsorakazo dia afaka hokapaina arakaraka ny fepetra takiana.
ny milina extrusion tsorakazo PTFE mivoaka avy any ambony ka hatrany ambany. Ny fitaovana dia apetraka eo amin'ny lampihazo na amin'ny gorodona miaraka amin'ny haavony 2,8 metatra eo ho eo. Ny elanelam-bidy mahomby amin'ny làlan-kizorana lava an'ny fitaovana dia mila dinihina, ary ny halavany ampy dia tsy maintsy omena toky eo ambanin'ny lavaka boribory raikitra amin'ny fitaovana hahafeno ny fepetra takian'ny halavan'ny tsoraka PTFE esorina.
Masinina extrusion tsorakazo PTFE mila mandinika ny elanelam-bidy mahomby amin'ny lalana marindrano an'ireo fitaovana, ary ilaina ny miantoka ny halavan'ny tsorakazo PTFE. Ny fitaovana dia misy halavan'ny bobongolo 4-7 metatra (tsy ankanavaka ny halavan'ny tsorakazo vita ivelany), ny sakany 1,2 metatra, ny haavon'ny 1,8 metatra.
Faritra gorodona milina (m2) 3.5 7 10
Hetezo ny tehina PTFE nesorina tamin'ny halavany.
7. FAMPIANARANA SY FITSIPIKA FIZARANA FIZARANA
9. Aorianan'ny serivisy famarotana
10. FITAOVANA FAMPIANARANA AUTOMATIC AOTOMATIC PTFE ROD
Famahanana mandeha ho azy ny vacuum, ao anatin'izany ny rafitra tsofina miverimberina mifamadika, manomboka ny rafitra fahanana, manasa fantsom-basy, basy hisoka, mpamokatra fantsona, mpanamory PCB, famoahana 30-300 kg / h, savaivony 150mm ary hahavony 600mm, mametraka fotoana fisakafoana mandeha ho azy sy fotoana fandefasana, vovoka Ny flow dia azo fehezina, ny famokarana vy tsy misy fangarony, ny fifehezana manan-tsaina.
11. FITAOVANA SAFIDY mifandraika